သွေးအမျိုးအစားအလိုက် အချစ်ရေးနှင့် ပတ်သက်သော နှလုံးသားရေးရာ ဟောကိန်းများ. . . - Myanmar People Alliance
သွေးအမျိုးအစားအလိုက် အချစ်ရေးနှင့် ပတ်သက်သော နှလုံးသားရေးရာ ဟောကိန်းများ. . .
ကိုယ့်ရဲ့သွေးအမျိုးအစားအလိုက် တွက်ချက်ပြီးတော့ ခန့်မှန်းထားတဲ့ ဟောကိန်းလေးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့တွေလည်း သွေးအမျိုးအစားအလိုက် နည်းနည်းပါးပါးတော့ သိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခါ ပြောချင်တာကတော့ သွေးအမျိုးအစားအလိုက် အချစ်ရေးမှာ ကံခေတတ်တာလေးတွေနဲ့ နှလုံးသားရေးရာကိစ္စလေးတွေကို အကြောင်းပါပဲ။ ထိုသွေးအမျိုးအစားတွေကတော့
၁။ A သွေးပိုင်ရှင်လေးများ
သူတို့ဟာ တကယ်တော့ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင် ရေခဲတုံးတစ်တုံးလို ခပ်အေးအေးနဲ့ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိတတ်တဲ့သူလေးတွေပါပဲ။ A သွေးလေးတွေရဲ့ မူလပင်ကိုယ်စရိုက်ကိုယ်က ခပ်အေးအေးလေး နေတတ်ကြတဲ့အတွက် သူတို့တွေဟာ အချစ်ရေးမှာရော၊ တခြားကိစ္စတွေမှာပါ တည်ငြိမ်သူလေးတွေ ၊ ထုံပေပေလေးတွေလို့ အပြောခံရတတ်ပါတယ်။
သူတို့တွေဟာ ပြဿနာကို ရှောင်ရှားနိုင်ကြတာ ၊ ဖြစ်လာမယ့် ပြဿနာတွေကို ကြိုတင်တွေးဆတတ်ကြပြီး သူတို့ရဲ့စကားအသွားအလာကို ထိန်းသိမ်းတတ်ကြတဲ့အတွက် အများအမြင် သူတို့တွေဟာ ပွင့်လင်းမှုမရှိဘူးလို့ တစ်ခါတစ်ရံမှာလည်း အပြောခံရတတ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး အလုပ်ထဲမှာစိတ်နှစ်ပြီးတော့ အလုပ်အပါ် တာဝန်ယူစိတ်အပြည့်ရှိတတ်ကြတဲ့အတွက် လူမှုရေးနဲ့တစ်ခြားကိစ္စတွေမှာ လစ်ဟင်းတတ်ကြတယ်။
သူတို့လေးတွေဟာ အနေအေးတတ်ပေမယ့် တကယ်တမ်းတော့ အရမ်းနူးညံ့တဲ့ နှလုံးသားပိုင်ရှင်တွေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့အေးတိအေးစက်နဲ့ မှုန်တေတေအမူအရာလေးတွေကြောင့် ချစ်သူရဲ့အထင်လွဲခြင်းကိုလည်း မကြာခဏ ခံရတတ်တယ်။
အချစ်ရေးမှာ အဲဒီလောက်ကံမခေကြပေမယ့် ချစ်သူရဲ့အားမလိုအားမရ၊ နားပူနားဆာလုပ်တာကိုလည်း အမြဲခံနေရတဲ့သူလေးတွေပေါ့ ။ အဲဒီအတွက် သူတို့ Aသွေးလေးတွေကို မချစ်တော့ဘူးပေါ့ဆိုတော့ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီလို နေတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုပဲ ဆုံတဲ့သူတွေက သဲသဲလှုပ် ပိုချစ်တတ်ကြပါတယ်။
၂။ B သွေးပိုင်ရှင်လေးများ
သူတို့လေးတွေဟာ တကယ်တော့ လက်တွေ့ကျတဲ့ သွေးပိုင်ရှင်လေးတွေပါပဲ။ သူတို့တွေနဲ့ချစ်သူဖြစ်ရတာ တစ်ခါတစ်လေကျရင် လက်တွေ့အရမ်းဆန်တတ်လို့ သူတို့တွေကို နှလုံးသားမရှိဘူးလို့တောင် ထင်ရတယ်။
သူတို့ရဲ့ အချစ်အပေါ်ထားတဲ့ခံယူချက်ဟာ အနုအရွတွေ၊ ရိုဆန်ဆန်အပြုအမူမျိုးတွေမဟုတ်ပဲ ဒီအတိုင်းရင်ထဲမှာ ရှိနေရင် အချစ်ဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် ငါ့အပေါ်ကို ချစ်မှချစ်ရဲ့လားလို့ ချစ်သူရဲ့ မယုံသင်္ကာမျက်လုံးနဲ့ အကြည့်ခံရသူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ရင်ထဲက ခံစားမှုတွေထက်စာရင် ဦးနှောက်ရဲ့စေစားရာကိုပဲ ဦးစားပေးကြတဲ့အတွက် ချစ်ရတဲ့ချစ်သူနဲ့ လွဲချော်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေလည်း ရှိတတ်တယ်။ အဲဒီတော့ B သွေးလေးတွေနဲ့သာ ချစ်သူဖြစ်ရင် သူတို့တွေရဲ့ စိတ်သဘောထားကိုလည်း နားလည်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။
၃။ AB သွေးပိုင်ရှင်လေးများ
သူတို့လေးတွေဟာ ပျော်ပျော်နေတတ်ကြတဲ့ သွေးအုပ်စုလေးတွေပါပဲ။ သူတို့တွေရဲ့ အချစ်အပေါ်မှာ ထားတဲ့ခံယူချက်က အတော်လေး ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဆန်ပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အချစ်ဆိုတဲ့အရာလောက် အရေးကြီးတာမရှိတော့ဘူးဆိုရလောက်အောင် အချစ်ကို နောက်ဆုံးမှာ ထားတတ်ကြတယ်။ တကယ်လို့ သူတို့မှာ ချစ်သူရှိနေရင်လည်း အဲဒီအချစ်ရေးဟာ ကြာရှည် မတည်မြဲတတ်ပါဘူး။
အချစ်ထက်စာရင် အပျော်အပါး၊ အပေါင်းအသင်း နဲ့ မိသားစုကို ပဲကြည့်တတ်ကြလို့ ချစ်သူက အမြဲတမ်းနောက်ကို ရောက်နေတတ်တယ်။ အဲဒီလိုပြောလို့ သူတို့တွေကို မချစ်တတ်ဘူးလို့တော့ မထင်ပါနဲ့။
သူတို့တွေရဲ့ အနွံအတာ၊ ဆိုးနွဲ့မှုတွေကို သည်းခံနိုင်တဲ့သူကို ရှာရင်းနဲ့ပဲ ရည်းစားများတဲ့သူ၊ အသဲခွဲတဲ့သူ စတဲ့နာမည်တွေ ရသွားတတ်တယ်။
တကယ်လို့ သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ချစ်သူဟာ AB သွေးလေး ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သူတို့ရဲ့အပျော်အပါးမက်တဲ့စိတ် ၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေချင်တဲ့စိတ်လေးတွေကို ကောင်းကောင်း လက်ခံပေးဖို့ လိုပါတယ်။
၄။ O သွေးပိုင်ရှင်လေးများ
ဒီ အိုသွေးလေးတွေကတော့ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင် နှလုံးလမ်းကြောင်းမှာ ကျွန်းခံနေတယ်လို့ပဲ ပြောရမယ်ထင်ပါရဲ့။ သူတို့လေးတွေဟာ နှလုံးသားနုနယ်သလောက်၊ အရမ်းလည်း အချစ်ကြီးတတ်ကြတယ်။
သူတို့ရဲ့အချစ်ဆိုတာက ဘယ်သူတွေ ဘယ်လိုမျိုးပဲလာလာ၊ ဒီတစ်ယောက်တည်းကိုပဲ သူတို့ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက် သစ္စာရှိရှိနဲ့ ချစ်သွားမယ့်သူမျိုးတွေပဲပေါ့။ တစ်ယောက်ဆိုရင် ဆိုသလောက် ချစ်တတ်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပေမယ့် သူတို့ရဲ့ ချစ်သူက သစ္စာဖောက်တာခံလိုက်ရတဲ့အခါမျိုးမှာ အရမ်းကိုခံစားရမယ့်သူမျိုးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြတ်သွားခဲ့ရင်တောင် အဲဒီချစ်သူကို ရင်ထဲမှာထားပြီးတော့ တမ်းတနေတတ်ကြတဲ့သူမျိုးလေးတွေပါ။ နောက်ပြီးချစ်သူအပေါ်မှာ အရမ်းအနွံတာခံ၊ အောက်ကျို့ခံပြီးတော့ ချစ်တတ်ကြတာမို့ ချစ်သူရဲ့အနိုင်ယူခြင်းကို မကြာခဏခံရတဲ့သူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ အိုသွေးလေးတွေနဲ့သာ ချစ်သူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သင်ဟာ ကံအရမ်းကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်ပါပဲ။ ဒါကြောင့် သင် သူတို့ဆုံခဲ့ရင် သူတို့ကို အတတ်နိုင်ဆုံးဖေးမပြီးတော့ ချစ်ပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ABSY
ကိုယျ့ရဲ့သှေးအမြိုးအစားအလိုကျ တှကျခကျြပွီးတော့ ခနျ့မှနျးထားတဲ့ ဟောကိနျးလေးတှေ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ သူငယျခငျြးတို့တှလေညျး သှေးအမြိုးအစားအလိုကျ နညျးနညျးပါးပါးတော့ သိကွလိမျ့မယျလို့ထငျပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ဒီတဈခါ ပွောခငျြတာကတော့ သှေးအမြိုးအစားအလိုကျ အခဈြရေးမှာ ကံခတေတျတာလေးတှနေဲ့ နှလုံးသားရေးရာကိစ်စလေးတှကေို အကွောငျးပါပဲ။ ထိုသှေးအမြိုးအစားတှကေတော့
၁။ A သှေးပိုငျရှငျလေးမြား
သူတို့ဟာ တကယျတော့ အခဈြရေးနဲ့ပတျသကျလာရငျ ရခေဲတုံးတဈတုံးလို ခပျအေးအေးနဲ့ တညျတညျငွိမျငွိမျရှိတတျတဲ့သူလေးတှပေါပဲ။ A သှေးလေးတှရေဲ့ မူလပငျကိုယျစရိုကျကိုယျက ခပျအေးအေးလေး နတေတျကွတဲ့အတှကျ သူတို့တှဟော အခဈြရေးမှာရော၊ တခွားကိစ်စတှမှောပါ တညျငွိမျသူလေးတှေ ၊ ထုံပပေလေေးတှလေို့ အပွောခံရတတျပါတယျ။
သူတို့တှဟော ပွဿနာကို ရှောငျရှားနိုငျကွတာ ၊ ဖွဈလာမယျ့ ပွဿနာတှကေို ကွိုတငျတှေးဆတတျကွပွီး သူတို့ရဲ့စကားအသှားအလာကို ထိနျးသိမျးတတျကွတဲ့အတှကျ အမြားအမွငျ သူတို့တှဟော ပှငျ့လငျးမှုမရှိဘူးလို့ တဈခါတဈရံမှာလညျး အပွောခံရတတျပါတယျ။
နောကျပွီး အလုပျထဲမှာစိတျနှဈပွီးတော့ အလုပျအပျါ တာဝနျယူစိတျအပွညျ့ရှိတတျကွတဲ့အတှကျ လူမှုရေးနဲ့တဈခွားကိစ်စတှမှော လဈဟငျးတတျကွတယျ။
သူတို့လေးတှဟော အနအေေးတတျပမေယျ့ တကယျတမျးတော့ အရမျးနူးညံ့တဲ့ နှလုံးသားပိုငျရှငျတှပေါပဲ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ရဲ့အေးတိအေးစကျနဲ့ မှုနျတတေအေမူအရာလေးတှကွေောငျ့ ခဈြသူရဲ့အထငျလှဲခွငျးကိုလညျး မကွာခဏ ခံရတတျတယျ။
အခဈြရေးမှာ အဲဒီလောကျကံမခကွေပမေယျ့ ခဈြသူရဲ့အားမလိုအားမရ၊ နားပူနားဆာလုပျတာကိုလညျး အမွဲခံနရေတဲ့သူလေးတှပေေါ့ ။ အဲဒီအတှကျ သူတို့ Aသှေးလေးတှကေို မခဈြတော့ဘူးပေါ့ဆိုတော့ မဟုတျဘူး။ အဲဒီလို နတေဲ့ပုံစံလေးတှကေိုပဲ ဆုံတဲ့သူတှကေ သဲသဲလှုပျ ပိုခဈြတတျကွပါတယျ။
၂။ B သှေးပိုငျရှငျလေးမြား
သူတို့လေးတှဟော တကယျတော့ လကျတှကေ့တြဲ့ သှေးပိုငျရှငျလေးတှပေါပဲ။ သူတို့တှနေဲ့ခဈြသူဖွဈရတာ တဈခါတဈလကေရြငျ လကျတှအေ့ရမျးဆနျတတျလို့ သူတို့တှကေို နှလုံးသားမရှိဘူးလို့တောငျ ထငျရတယျ။
သူတို့ရဲ့ အခဈြအပျေါထားတဲ့ခံယူခကျြဟာ အနုအရှတှေ၊ ရိုဆနျဆနျအပွုအမူမြိုးတှမေဟုတျပဲ ဒီအတိုငျးရငျထဲမှာ ရှိနရေငျ အခဈြဖွဈတယျ ဆိုတဲ့အတှကျကွောငျ့ ငါ့အပျေါကို ခဈြမှခဈြရဲ့လားလို့ ခဈြသူရဲ့ မယုံသင်ျကာမကျြလုံးနဲ့ အကွညျ့ခံရသူတှလေညျး ဖွဈပါတယျ။
သူတို့ရဲ့ရငျထဲက ခံစားမှုတှထေကျစာရငျ ဦးနှောကျရဲ့စစေားရာကိုပဲ ဦးစားပေးကွတဲ့အတှကျ ခဈြရတဲ့ခဈြသူနဲ့ လှဲခြျောရတဲ့အဖွဈမြိုးတှလေညျး ရှိတတျတယျ။ အဲဒီတော့ B သှေးလေးတှနေဲ့သာ ခဈြသူဖွဈရငျ သူတို့တှရေဲ့ စိတျသဘောထားကိုလညျး နားလညျပေးဖို့ လိုပါတယျ။
၃။ AB သှေးပိုငျရှငျလေးမြား
သူတို့လေးတှဟော ပြျောပြျောနတေတျကွတဲ့ သှေးအုပျစုလေးတှပေါပဲ။ သူတို့တှရေဲ့ အခဈြအပျေါမှာ ထားတဲ့ခံယူခကျြက အတျောလေး ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဆနျပါတယျ။
ကမ်ဘာပျေါမှာ အခဈြဆိုတဲ့အရာလောကျ အရေးကွီးတာမရှိတော့ဘူးဆိုရလောကျအောငျ အခဈြကို နောကျဆုံးမှာ ထားတတျကွတယျ။ တကယျလို့ သူတို့မှာ ခဈြသူရှိနရေငျလညျး အဲဒီအခဈြရေးဟာ ကွာရှညျ မတညျမွဲတတျပါဘူး။
အခဈြထကျစာရငျ အပြျောအပါး၊ အပေါငျးအသငျး နဲ့ မိသားစုကို ပဲကွညျ့တတျကွလို့ ခဈြသူက အမွဲတမျးနောကျကို ရောကျနတေတျတယျ။ အဲဒီလိုပွောလို့ သူတို့တှကေို မခဈြတတျဘူးလို့တော့ မထငျပါနဲ့။ သူတို့တှရေဲ့ အနှံအတာ၊ ဆိုးနှဲ့မှုတှကေို သညျးခံနိုငျတဲ့သူကို ရှာရငျးနဲ့ပဲ ရညျးစားမြားတဲ့သူ၊ အသဲခှဲတဲ့သူ စတဲ့နာမညျတှေ ရသှားတတျတယျ။
တကယျလို့ သူငယျခငျြးတို့ရဲ့ခဈြသူဟာ AB သှေးလေး ဖွဈခဲ့မယျဆိုရငျ သူတို့ရဲ့အပြျောအပါးမကျတဲ့စိတျ ၊ လှတျလှတျလပျလပျ နခေငျြတဲ့စိတျလေးတှကေို ကောငျးကောငျး လကျခံပေးဖို့ လိုပါတယျ။
၄။ O သှေးပိုငျရှငျလေးမြား
ဒီ အိုသှေးလေးတှကေတော့ အခဈြရေးနဲ့ပတျသကျလာရငျ နှလုံးလမျးကွောငျးမှာ ကြှနျးခံနတေယျလို့ပဲ ပွောရမယျထငျပါရဲ့။ သူတို့လေးတှဟော နှလုံးသားနုနယျသလောကျ၊ အရမျးလညျး အခဈြကွီးတတျကွတယျ။
သူတို့ရဲ့အခဈြဆိုတာက ဘယျသူတှေ ဘယျလိုမြိုးပဲလာလာ၊ ဒီတဈယောကျတညျးကိုပဲ သူတို့ရဲ့ဘဝတဈလြှောကျ သစ်စာရှိရှိနဲ့ ခဈြသှားမယျ့သူမြိုးတှပေဲပေါ့။ တဈယောကျဆိုရငျ ဆိုသလောကျ ခဈြတတျကွတဲ့သူတှဖွေဈပမေယျ့ သူတို့ရဲ့ ခဈြသူက သစ်စာဖောကျတာခံလိုကျရတဲ့အခါမြိုးမှာ အရမျးကိုခံစားရမယျ့သူမြိုးတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
ပွတျသှားခဲ့ရငျတောငျ အဲဒီခဈြသူကို ရငျထဲမှာထားပွီးတော့ တမျးတနတေတျကွတဲ့သူမြိုးလေးတှပေါ။ နောကျပွီးခဈြသူအပျေါမှာ အရမျးအနှံတာခံ၊ အောကျကြို့ခံပွီးတော့ ခဈြတတျကွတာမို့ ခဈြသူရဲ့အနိုငျယူခွငျးကို မကွာခဏခံရတဲ့သူတှလေညျး ဖွဈပါတယျ။
အဲဒီတော့ အိုသှေးလေးတှနေဲ့သာ ခဈြသူဖွဈခဲ့မယျဆိုရငျ သငျဟာ ကံအရမျးကောငျးတဲ့သူတဈယောကျပါပဲ။ ဒါကွောငျ့ သငျ သူတို့ဆုံခဲ့ရငျ သူတို့ကို အတတျနိုငျဆုံးဖေးမပွီးတော့ ခဈြပါလို့ တိုကျတှနျးလိုကျပါတယျ။ABSY
Health, Knowledge, Uncategorized, Wonders